कहाँ छ धेरै सुन ! « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
कहाँ छ धेरै सुन !
२८ असार २०७२, सोमबार ०४:२१
काठमाडौं । मानिन्छ कि अमेरिकाको केंटुकी फोर्ट नक्स स्थित बुलियन डिपोजिटरीमा सुनको ठुलो मात्रा राखिएको छ । त्यहा लगभग ४ हजार ५ सय ७७ मेट्रिक टन सुन राखिएको छ, जुन मानव इतिहासमै आज सम्म उत्खनन गरेर निकालिएको कुल सुनको करिब ४० औ भाग हो ।
सन् १९३६ मा अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टद्वारा केंटुकी स्थित फोर्ट नक्समा यूनाइटेड स्टेट्स बुलियन डिपोजिटरीको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेन्टलाई उक्त जमीन अमेरिकी मिलिटरीले प्रदान गरेको थियो । जसको निर्माण कार्य डिसेम्बेर १९३६ मा सम्पन्न भएको थियो । यस भवनको निर्माण कार्यको लागि त्यो समयमा ५ दशमलब ६ लाख अमेरिकी डलर बराबर खर्च भएको थियो । सन् १९८८ मा भवन रहेको ठाउँलाई अमेरिकी नेशनल रजिस्टर अफ हिस्टोरिक प्लेसेज (ऐतिहासिक स्थानहरुको राष्ट्रीय सूची)मा समाबेश गरिएको थियो ।
अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडरल रिजर्वको न्यूयार्क कार्यालयमा रहेको स्वर्ण कक्षमा पनि केंटुकीफोर्ट भन्दा पनि अधिक सुन राखिएको छ, तर त्यस कक्ष राखिएको सुन अमेरिकाको मात्र नभई विभिन्न देश र संगठनहरुको समाबेश रहेको छ । यस भवनको जमिन स्तरभन्दा ८० फीट मुनि एउटा ठुलो स्वर्ण कक्ष रहेको छ, जसमा करिब ७ हजार मीट्रिक टन सुन राखिएको छ । संसार भर छरिएर रहेको कुल सुनको १० औ भाग उक्त कार्यालयमा रहेको छ, तर संसारकै सबैभन्दाको ठुलो सुन खानी ग्रैसबर्ग (पापुआ, इंडोनेशिया) रहेको छ।एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : २८ असार २०७२, सोमबार ०४:२१